ဆယ်ပါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျွန်တော့် | Apg29
ဒါပေမဲ့အုတ်ဂူပေါ်နှစ်ဦးစလုံးဒီဇင်ဘာလ 22, 2008 အဆိုပါသင်္ချိုင်းဟာ Woodland သုသာန်မှာJönköping၌တည်ရှိ၏ကွယ်လွန်သွားကပြောပါတယ်။ သင်္ချိုင်းတွင်း၌နှစျခုအဖြူခေါင်းရှိပါသည်။ တစ်ဦးကကြီးမားသောရင်ဘတ်နှင့်ကြီးများအပေါ်ရပ်တည်တဲ့သေးငယ်တဲ့ရင်ဘတ်။
ဤအဖြစ်ရပ်များလျှင်, ငါအရှည်ဆုံးညဥ့်တိကျမ်း၌ရေးထားသမျှပါပြီ။ ဒါဟာရွေ့လျားပြီးအလွန်အံ့သြဖွယ်များနှင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယေရှုခရစ်၌တောက်ပသောမျှော်လင့်ချက်မှမှတ်။ သင်ကအမိန့်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဆဲစာအုပ်ရနိုင်။ ဒါဟာ 150 SEK ကုန်ကျသည်။ ဒါစျေးပေါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါကအပေါ်ဘာမျှဝင်ငွေ။ အဆိုပါစာအုပ်ယေရှုခရစ်၌မျှော်လင့်ပါတယ်ဖို့နှစ်သိမ့်အားပေးမှုများနှင့်ရမှတ်ပေးသည်။ ဒါဟာအစအကောင်းဆုံး evangelisationsbok ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ဝယ်ပါသို့မဟုတ်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်တစ်ယောက်ယောက်ကိုကြောင့်ပေးပါ။
ငါငါတို့အိပ်ရာခင်းပေါ်မှာထိုင်နှင့်ငါ့ဘလော့ဂ် site ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာညအချိန်တွင်တကျိပ်တပါးသောဝက်အတိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ရှေ့မှာငါပြိုကျနိုင်မယ့်သေးငယ်တဲ့သစ်သားစားပွဲပေါ်တွင်အကြှနျုပျ၏လက်ပ်တော့ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါမှတပါးအခြားသောသူမ၏ကြီးမားသောဝမ်းနဲ့ငါ့ချစ်ရာသခင်သည်ဇနီးနှင့်သတင်းစာများတွင်ဖတ်ရှုခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်ခန်းမှလာမယ့်အခန်းထဲမှာ Dessan ကြီးနှင့်သူ့အိပ်ရာမှာအိပ်ခဲ့ရတယ်။ အရာအားလုံးတိတ်ဆိတ်ခဲ့သမျှကိုငြိမ်းချမ်းသောကြီးနှင့်အရာခပ်သိမ်းဒဏ်ငွေဖြစ်ခဲ့သည်။ ကခရစ်စမတ်ချဉ်းကပ်အမျှငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်အတွက်လိုခဲ့သကဲ့သို့ငါအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများအတွက်ခရစ္စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့စာရင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါမာရီသည်သူ၏သတင်းစာကိုတက်ခေါက် said:
မာရီ snoring နှင့်ယခုသူမအကြီးအကျယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အခါ, သူမ၏ပိုဆိုး snoring ။ ငါ့ကိုနှောင့်ယှက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ရန်အတွက်သူမကအခြားအခန်းတွင်အိပ်ရာကိုသွားချင်တယ်။ ဥပဒေပိုကြီး Hal အတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်ပြင်ဆင်ခဲ့နှင့်စားပွဲဘေးမှာအိပ်ရာထဲမှာထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့တချို့အကြောင်းပြချက်ကိုငါမာရီယနေ့ညဉ့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခန်းထဲမှာအိပ်သွားပါလိမ့်မယ်မထင်ခဲ့ပေ။
"သင်မနေနိုင်သလား?" ကျနော်သူမကိုမေးတယ်။ သို့သော်သူမသည်ခန်းမထဲမှာအိပ်ချင်သည်ဟုအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။
"ကောင်းပြီ" ငါကဆိုပါတယ် "ဟုတ်တယ်, ငါလုပ်ပေးလိမ့်မယ် '' ဒါပေမယ့်သင်ကရေချိုးခန်းကိုသွားသည့်အခါကျွန်မကွန်ပျူတာနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်သင်ကောင်းစွာငါ့ထံသို့ကြွလာတော်မူမည်အကြောင်း," လို့သူကပြောပါတယ်, အခန်းထဲမှာကျန်ရစ်နှင့်ပိတ်ထား တံခါးကို။
ငါထုတ်ဝေရန်စဉ်းစားကြောင်းခရစ္စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကူးအပေါက်ဆက်သွယ်မှုငါ၏စာရင်းကိုရေးသားဖို့ဆက်ပြောသည်။ ကျွန်မအိပ်ခန်းတံခါးကိုရုတ်တရက်ဖွင့်ညမှာတကျိပ်နှစ်ပါးနာရီလောက်မှာမတိုင်မီဖွင့်လှစ်ခြင်း, မာရီထဲသို့ဝင်သောအခါအခဏ၌ဤငြိမ်းချမ်းသောညနပေိုငျးလုံးဝအသွင်ပြောင်းမယ်လို့မပေးသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကနေမျှော်ကြည့်ခြင်းနှင့်မာရီကိုမြင်သောအခါ, ငါသည်ကောင်းစွာကြောင့်ရပ်တန့်ဖို့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ပါစဉ်းစားမိတယ်။
"ခရစ် ... "
ဒါဟာသူမကလည်းအကြွင်းမဲ့အာဏာနောက်ဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ၏နာမကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးလှပလမ်းအတွက်အလွန်မတ်ေတာရှိတဲ့လေသံနှင့်အတူကဆိုသည်။ ထိုသို့သူမနည်းနည်းများအတွက် crouched ။ ငါနှစ်ဦးစလုံးမြင်သူမနာကျင်မှုအတွက်ဖွစျသညျကိုသိ၏။
ငါနေဆဲသေးငယ်တဲ့သစ်သားစားပွဲပေါ်မှာပေါ်လက်ပ်တော့နှင့်အတူကျန်ရစ်နေတုန်းက "BB ဘို့အချိန်ရှိသလော" ငါမေး၏။
သူမသည်ငါ ပို. ပင်နာကျင်မှုအတွက်ကွေးရှေ့ဆက် decipher နှင့် crouched နိုင်ဘူးကြောင်းငါ့ထံသို့နီးပါး inaudible တစ်ခုခုကဆိုသည်။ ငါအလျင်အမြန်ထသူမ၏မှတက် သွား. သူမကြမ်းပြင်မှမကျလို့သူမကိုခေါ်သွားတယ်။ ငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်း၌ BB မှဖုန်းအဘို့အကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့တာပါနေချိန်မှာငါနှစ်ဆအိပ်ရာ၏ခွမှသူမ၏ဦးဆောင်ခြင်းနှင့်ညင်ညင်သာသာချဘက်မှာသူမ၏တင်ကြ၏။
ငါနှင့် Dessan နိုင်ရန်အတွက်ထားဖူးသောကလေးရဲ့အိပ်ရာများ၏ရှေ့မှောက်၌, အိပ်ရာ၏ခွမှာရှိဒါကောင်းတဲ့ရပ်ငါတို့အိပ်ရာခင်းကိုဖြတ်ပြီးမာရီမုသားကိုဖန်ဆင်းအဖြစ် Marie ရုတ်တရက်ပြင်းပြင်းထန်ထန် rattle စတင်မှီတိုငျအောငျ, ငါသည်ဤမျှလောက်များစွာသောစက္ကန့်ဘို့အကြှနျုပျ၏အမှတျဉာဏျထဲမှာမဆိုဖုန်းနံပါတ်မရှာနိုင်ခဲ့ တစ်လည်ချောင်းနာ ​​gurgling နှင့်အသံပွက်ပွက်။ ငါတကယ်ငါလုပျဆောငျမညျဘယျအရာမသိ, ဒါပေမယ့်အသိငါကအိပ်ရာပေါ်မှာသူမ၏တက်ထားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါရှေ့ဆက်ငုံ့သူမ၏ဆှဲနှင့်သူမ၏တက်ထားတော်မူ၏။ ငါနေဆဲငါ့လက်ရုံးအတွက်သူမ၏ကိုင်ထားစဉ်ထို့နောက်သူမကြမ်းပြင်မှအိပ်ရာ၏ခွမှဆင်းကျဆင်းခဲ့သည်။
အဲဒီနောက်သူကနားမလည်ခဲ့ဘူး, ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာမာရီငါ့လက်ရုံး၌သေကြ၏။ သူမသည်ငါ့လက်မောင်းသေဆုံးခဲ့ကတည်းကသူမကပြောသည်နောက်ဆုံးအရာ, ငါ၏နာမကိုအမှီဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ 22 ညဉ့်တွင်, 2008 ခုနှစ်အများဆုံးမှောင်မိုက်နာရီနှင့်အတူည Christer Åbergသူထက်ဝက်သူ့မိသားစုကိုရှုံးသည်အလွန်စိတ်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်မထားတဲ့အခါသူ၏အသက်တာ၏အရှည်လျားဆုံးညဥ့်ကြုံတွေ့နေကြရသည်။
လူအတော်များများ၏စကားကိုကြားနှင့်သူတို့စာအုပ်ကိုဖတ်ရသောအခါသူတို့က, အရှည်ဆုံးညဥ့်ပါပြီဘယ်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိုးရိမ်မိမျက်မြင်ပါပြီ။ လူတစ်ဦးသည်ငါ့ဆီသို့ wrote:
"ကျွန်မဖတ်စတင်ခဲ့သည့်အခါကျွန်မဒါကြောင့်ထိမိခဲ့သည်။ သင်သည်အဘယ်သို့ရေးထားပြီကောင်းတဲ့စာအုပ်။ ရပ်တန့်နိုင်ဘူး။ "
ဒီဇင်ဘာလ 22 ညဉ့်တွင်, 2008 ခုနှစ်အများဆုံးမှောင်မိုက်နာရီနှင့်အတူည Christer Åbergသူတစ်ဦးအလွန်စိတ်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်မထားတဲ့အခါမိမိအသက်အရှည်ဆုံးနှင့်အမှောင်ညဥ့်ကြုံတွေ့နေကြရသည်တစ်ဝက်သူ့မိသားစုကိုရှုံးသည်။
အဆိုပါစာအုပ်သည်လည်းဘုရားသခင်အဘို့ Christer Åbergရဲ့ရှာဖွေရေးနှင့် ပတ်သက်. ပူပြင်းတဲ့ဇာတ်ကြောင်းပြောချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘဝ-ရှည်လျားမတ်ေတာအတှကျမိမိအလိုဆန္ဒနှင့်အတစ်နေ့မှာသူ့အိပ်မက်နောက်ဆုံးတော့အမှန်တကယ်ချစ်ပြီးတပ်မက်လိုချင်သောအခံစားရတယ်။
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကြီးမားတဲ့စျေးမှာတှငျနထေိုငျမြားနှငျ့အခွအေနကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံမသိခဲ့ပါ, မငါငိုပြီးရင်းငိုကြွေးကြော်သူကိုငါ့သမီးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်လို့ဘယ်လိုသိခဲ့ဘူး ...
ငါယဇ်ပုရောဟိတ်ငါ Dessan ဖို့ပြောလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုမေးမွနျးခဲ့ကွသညျ့အခါမှငါ့ကိုအကြံပေးခဲ့အတိအကျဘာလုပ်ခဲ့:
"ထိုသို့အတိအကျသကဲ့သို့ငါ့ကိုပြောပြပါ။ သင်ကအဖြစ်မှန်ကနေကလေးတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်လို့မရပါဘူး။ "
ဒါနဲ့သူမကယေရှုနှင့်အတူကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူခဲ့သည်နောက်တဖန်အိမ်မှာလာတော့မှအကြောင်း, mom, သေကြောင်းကို Dessan သို့ပြောသည်။ သူမ၏မိခင်ရှိရာသူငယ်တန်းအတွက်ကလေးတစ်ဦးအကြာတွင်သူမ၏မေးတဲ့အခါသူမက replied:
"သူသည်အသေဖြစ်၏, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်ယေရှုနှင့်အတူဖြစ်၏။ "
ယခုမူကားရုံကိုအျောဟစျနဲ့သူမအော်ဟစ်ကြ၏။ သူမသည်ဖြေမဆည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါနှင့်အတူလုပ်ပေးမယ်လို့အဘယ်အရာကိုမသိခဲ့ပါ။ ငါသည်ငါ့လက်မောင်းအတွက် Dessan နှင့်အတူအခန်းသို့သွားလေ၏။ သူမသည်ဟစျကျွောလေ၏နှင့်ငါ့ပခုံးဆန့်ကျင်သည်သူ၏မျက်နှာနှင့်အတူအိပ်လေ၏။
ငါ Dessan သင်တို့သည်ငါ၌နထေိုငျကောင်းတဲ့သီဆို ဟူ. ၎င်းကြိုက်တယ်သိတယ်။ သူမသည်သူ့ကိုငါမေးသော်အခါငါဘာမှမနာသီချင်းဆိုနိုင်လျှင်အစဉ်အမြဲဆန္ဒရှိလေ့ရှိတယ်။ သူမသည်သငျသညျငါ့ကိုမရှငျ ဟူ. ၎င်းထိုသို့ခေါ်သော်လည်းသူမအမြဲကပြောသည် "ခင်ဗျားကိုခြီးမှမျး။ " အဖြစ်မကြာမီသူမပြောပါရန်အသုံးပြုအဖြစ် "ခြီးမှမျးသငျသညျ" ငါသည်သူမဓိပ်ပာယျကိုသီချင်းချက်ချင်းသိတယ်။ ငါသီခငျြးကိုအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးလူကြီးများနှင့်ကလေးများများအတွက်ကိုက်ညီ။
ငါသည်အဘယ်သို့သီခငျြးဆိုသင့်သလဲ ​​"ကျွန်မသူမကကျွန်မကို့သီချင်းကိုဆိုချင်သည်ဟုယုံကြည်, Dessan မေးတယ်။
ဒါပေမယ့်ငါ့အအံ့အားသင့်ဖို့, Dessan ပြီးစီးခဲ့ငို said:
အဆိုပါပင့်ကူ? Itsy Bitsy ပင့်ကူ? "သူကတောင်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသီချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့လက်ရုံး Ivar ကြီးမားသောတိုက်ခန်းတွင်သူမ၏နှင့်အတူနေစဉ်ကျွန်မငါ့သမီးထိုသို့သီဆိုခဲ့။
Itsy Bitsy ပင့်ကူ
Up ကိုနေရောင်တို့သည် လာ.
Itsy Bitsy ပင့်ကူ
ဤသည်ငါ့အားအတော်လေးတရားဟောခဲ့ပါတယ်။ ငါသီခငျြးကိုသီဆိုခဲ့သည့်အခါဒါကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးထဲမှာပင့်ကူနှင့်အတူအဖြစ်အပျက်ခြယ်။ ငါသူချည်တက်မှရုန်းကန်ပုံကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒါပေမယ့်ရုတ်တရက်ဘေးဥပဒ်ကို။ မိုးရွာ လာ. , ပင့်ကူပျောက်ဆေးကြော။ အံ့ဖွယ် - သို့သော်ထို့နောက်အံ့ဖွယ်သညျ လာ. ! နေရောင်ကိုမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ပင့်ကူရဲစွမ်းသတ္တိကိုယူနိုင်အောင်အားလုံးမိုးရွာခန်းခြောက်, တဖန်တက်မှစတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အလားတူပဲ, Dessan ငါဘေးဥပဒ်ကိုခံစားခဲ့ရပေမယ့်နေရောင်, ယရှေုကိုတက်ရရှိသွားတဲ့နှင့်ထပြန်ကိုတက်ဖို့သစ်ကိုခိုင်ခံ့နှင့်အတူနောက်တဖန်နိုင်အောင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်သောရဲစွမ်းသတ္တိကိုပေးတော်မူ၏။
ငါသီခငျြးဆိုပြီးမှဒီသီခငျြးကိုမရှိတော့ Dessan ဟစျကျွောလေ၏။
- စျေးနှုန်း Check!
150 SEK / တစ်ဦးချင်းစီ
3 စာအုပ်တွေ: 300 SEK
ဘဏ်အကောင့်: 5,303 မှ 8169 725382-4
အဆိုပါစာအုပ်ကိုရေးသားဆယ်လကြာ ယူ. , ဒါပေမယ့်ဖတ်ရှုဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်လူငယ်နှင့်အထက်နှစ်ဦးစလုံးလူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်, စတဲ့အဖြစ် လက်ဆောင်တစ်ခု သို့မဟုတ် evangelisationsbok !
Christer Åbergသူမ၏သမီးအလိုဆန္ဒနှင့်အတူNässjöအနီး Meadow ဟာတွင်နေထိုင်ကြသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာသူအကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကဘလော့ဂ်ဆိုဒ်များ၏တဦးတည်းကို run ထားပြီးwww.apg29.nu ။ သူလည်းတစ်ဦးဧဝံဂေလိဆရာအဖြစ်အလုပ်ဖြစ်တယ်, သီချင်းဆို, ဂီတနှင့်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းအစည်းအဝေးတွေမှာကဟောပြောခြင်းနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်။
အဆိုပါစာအုပ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ် Semnos ကြေညာသူ။
ယနေ့ငါစိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းစွာခံစားမိပေမယ့်အရှည်ဆုံးညဥ့်၏ဖြစ်ရပ်များအမြဲငါနှင့်အတူ လာ. ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်သကဲ့သို့ငါသည်လည်းစာအုပ်ထဲတွင်ရေးသားခဲ့သည်: ယရှေုသညျမရှိရင်ငါဖန်ဆင်းခဲ့ကြတာပါ။